Shampoo sy fifehezana 10-in-2 1 tsara indrindra
[ad_1] Ianao ve dia iray amin'ireo mandehandeha foana amin'ny maraina? Halanao ve ny fiandrasana ny otrikaina aorian'ny fanasana ny volonao? Raha izany no izy, soa ihany ho anao, misy vokatra fikolokoloana volo an-taonina maro any izay manadio sy mampifanaraka ny volonao amin'ny fotoana iray. Ianao… Continue Reading Shampoo sy fifehezana 10-in-2 1 tsara indrindra
Published 15 Septambra 2021
Voasokajy ho Beauty
Hatsaran-tarehy 10 kintana izay niverina rehefa nilamina
[ad_1] NSWhy naninona i Alison Porter no nanjavona avy teo amin'ny efijery taorian'ny fahombiazan'ny Curly Sue, inona no nataon'i Svetlana Loboda rehefa nandao ny vondrona VIA GRA izy, ary ahoana ny fomba nitantanan'i Andie MacDowell "miverina" amin'ny mpilalao sarimihetsika iray modely? Hatsaran-kintana 10 izay niverina tamin'ny lazany taorian'ny malemy. Svetlana Loboda “Ny olona rehetra… Continue Reading Hatsaran-tarehy 10 kintana izay niverina rehefa nilamina
Published 10 Septambra 2021
Serum tarehy 5 no hovidiko
[ad_1] BThanks ireo vokatra ireo, nijanona tsy nieritreritra ny fototra amin'ny fiainana andavanandro aho, naka ny fikarakarana tsara indrindra amin'ny alina (tsy misy hoditra menaka ny maraina), nanadino momba ny fametahana hoditra ary tamin'ny ankapobeny no nanatsorana ny fahazarana tsara tarehy isan'andro - raha iray amin'ireo ny fitsaboana anao dia serum tarehy, ny zavatra hafa rehetra dia hanaraka. Rehetra… Continue Reading Serum tarehy 5 no hovidiko
manao ahoana izao ny crème renintsika?
[ad_1] Ny marika BAchromin dia mahazatra ny olona rehetra liana tamin'ny olan'ny fanamaivanana ny hoditra. Ary raha tsy mbola naheno momba azy tampoka ianao dia anontanio ny reninao - fantany tsara izany. Ny hany fanosotra ho an'ny pentina Achromin, izay ampiasain'ny vehivavy tao amin'ny USSR, dia novokarin'ny Bulgarian… Continue Reading manao ahoana izao ny crème renintsika?
Atleta vehivavy tsara tarehy 35 amin'izao fotoana izao
[ad_1] Ny gymnast HFamous dia manao azy aorian'ny fiafaran'ny fiainany manao fanatanjahan-tena, ary manao ahoana ny endrik'ilay mpilalao baolina kitra tsara indrindra any Rosia? Ny tapany farany amin'ny lahatsoratra momba ny tovovavy tsara tarehy amin'ny fanatanjahan-tena. Ny voalohany sy faharoa dia namaky ireo ampahany tamin'ny rohy. Margarita Mamun Margarita Mamun impito no tompon-daka eran'izao tontolo izao… Continue Reading Atleta vehivavy tsara tarehy 35 amin'izao fotoana izao
Volo 5 no vidiko miverimberina
[ad_1] TSY MISY shampooing, shimmer styling spray, root volumizing mousse ary vokatra hafa izay ampiasako hatramin'ny farany. Sofia Vorobyova BeautyHack Editor Shampoo hanisy volony amin'ny volon-tsakafo Extra Volume Shampoo sy ny mpamono zava-manalefaka Smoothing Conditioner, Moroccanoil Ny marika israeliana Moroccanoil dia namonjy ny voloko tamin'ny maina sy tany amin'ny maizina nandritra ny telo taona.… Continue Reading Volo 5 no vidiko miverimberina
Hevitra manicure poloney fotsy 40
[ad_1] Hevitra manicure poloney fotsy 40 [ad_2]
Anjara andraikitra tsara indrindra 8 an'i Angelina Jolie
[ad_1] V Tamin'ny fiandohan'ny asany, ny vehivavy tsara tarehy indrindra eto an-tany, araka ny filazan'ny magazine Vanity Fair, fa tsy akanjo dite Black, dia nandeha pataloha hoditra tamin'ny karipetra mena. Mety ny anjara asan'ny sarimihetsika: Gia - maodely lamaody misy psyche tsy milamina, tsara tarehy mahery setra Lara Croft, ilay zaza Kate… Continue Reading Anjara andraikitra tsara indrindra 8 an'i Angelina Jolie
Safidy manicure 20 manalava ny hohoo
[ad_1] Safidy manicure 20 manalava ny hohoo [ad_2]
10 zava-misy tsy fantatrao momba an'i Elizabeth II
[ad_1] TOQueen avy any Angletera Greater no mpanjaka lava indrindra teo amin'ny velona. Nanamarika ny faha-65 taonan'ny nanjonoany ny volana jolay. Nandritra io fotoana io dia nahavita namaly taratasy 3.5 tapitrisa i Elizabeth II, nahafantatra ireo papa fito ary nametraka fanangonana satroka 5,000. Ny zava-misy mahaliana indrindra momba ny mpanjakavavy dia ao… Continue Reading 10 zava-misy tsy fantatrao momba an'i Elizabeth II
Kintana 20 manao solomaso nefa tsy fantatrao
[ad_1] D Ho an'ny karipetra mena, misafidy solomaso izy ireo, ary amin'ny fotoana malalaka ananany amin'ny horonantsary sy hetsika ara-tsosialy dia mitafy solomaso mihiratra izy ireo. Ao amin'ny fisafidianana manokana BeautyHack dia misy kintana izay tsy matahotra omena anarana hoe "maso efatra". Minoa ahy, vao mainka haniry fatratra ny lisitra raha olo-malaza maro no tsy… Continue Reading Kintana 20 manao solomaso nefa tsy fantatrao
Mijanòna! Taovolo 8 taovolo mahatsiravina toy izao
[ad_1] Atsaharo! Taovolo 8 taonan-taona mahatsiravina [ad_2]
Seho fahitalavitra Breziliana 15 izay namaky firaketana raha ny fahitana ny mpijery
[ad_1] Manomboka amin'ny “Mpanompo an'i Izaura” ka hatrany amin'ny “Prospect of Brazil”! Ao amin'ny BeautyHack - andiany fahitalavitra Breziliana tsara indrindra nandritra ny 36 taona, izay nalefa tany Russia. “Andevo Izaura” Nanomboka tamin'ny 11 Oktobra 1976 ny andiany. Tao amin'ny USSR, ny "Slave Izaura" dia tsy naseho afa-tsy tamin'ny taona 1988 - io no savony voalohany tamin'ny fahitalavitra Sovietika.… Continue Reading Seho fahitalavitra Breziliana 15 izay namaky firaketana raha ny fahitana ny mpijery
Taovolo fironana 20 ho an'ny volo tsara
[ad_1] BeautyHack dia nanangona safidin'ireo taovolo malaza nahomby izay nandova kofehy manify. Ary ny stylists sy trichologists dia nilaza ny fomba hikarakarana ny volo toy izany ary inona no atao hoe fanaovana styling. Vyacheslav Gordeev Mpisolo tena malaza amin'ny salon Nikolskaya Club Salty Dog Cocktail Beach Spray, manampy ahy i Evo hamadika ny volo manify ho voluminous… Continue Reading Taovolo fironana 20 ho an'ny volo tsara
Vovon-tarehy 5 tsara indrindra araka ny filazan'ny mpamaky BeautyHack
[ad_1] WITHfunds from 799 to 4,000 rubles, izay ampiasain'ny mpamaky BeautyHack nandritra ny taona maro! Vovoka matevina Prisme Visage, Givenchy Natalia Mikhalyuk-Nehme am-polony taona maro lasa izay, niova ny fonosana Prisme Visage, ary ny vovo-tany dia ankafizin'ny zazavavy maro. Hanomboka amin'ny famolavolana ity bestseller ity aho eo amin'ny tontolon'ny cosmetic cosmet.… Continue Reading Vovon-tarehy 5 tsara indrindra araka ny filazan'ny mpamaky BeautyHack
Mandrosoa amin'ny tratra: kintana 8 misy mammoplasty tsy mahomby
[ad_1] Mandrosoa amin'ny tratra: kintana 8 tsy misy mamaky mammoplasty [ad_2]
Safidy 15 tsara indrindra avy amin'ny kintana
[ad_1] Hevitra 15 avy amin'ny karipetra mena, mifandraika amin'ny tena fiainana. Tafiditra ao ny toro-hevitra momba ny mpanakanto! Ny makiazy Hayley Bieber Luminous, toy ny an'i Hailey, dia mamelombelona avy hatrany, ka mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny asa mafy indrindra amin'ny alatsinainy. Mpanakanto makiazy Ksenia Nikitina dia manoro hevitra ny hametaka ny fotodrafitrasa Urban Decay ambanin'ny alokaloka. “Mitandrina tsara ny alokaloka mandritra ny 24 ora izy ireo. Misafidy satin… Continue Reading Safidy 15 tsara indrindra avy amin'ny kintana
Roman Moiseenko - hadisoana eo amin'ny enina eo amin'ny fanaovana anao
[ad_1] ROman Moiseenko dia iray amin'ireo mpanao volo sy taovolo malaza indrindra ao Rosia. Niasa tamina tetik'asa lehibe toy ny "Star Factory", "People's Artist", mpiara-miasa amin'ny programa "Take It Off dayon" ao amin'ny STS. Nolazain'i Roman tamin'ny BeautyHack ny fomba fanamainana tsara ny volonao, ny antony ilanao fanovana ny fisarahana ary inona… Continue Reading Roman Moiseenko - hadisoana eo amin'ny enina eo amin'ny fanaovana anao
ny fomba nataoko tamin'ny taovoloko sy makiazy tao amin'ny salon Art'Up
[ad_1] Gthe mahery ilay tetik'asa BeautyHack Katya nandany ora maro tao amin'ny Salon Art'Up tao amin'ny Patriarch's Ponds, izay nahazo volom-bolo vaovao sy tsy mahazatra, tamin'ny fahatsapany, makiazy. Stylist Eldar Adraev ary talen'ny zavakanto Art'Up mpanakanto make-up Alena Lapina dia niresaka momba ny fanandramana nataon'izy ireo. Talohan'ny Aorian'i Eldar Adraev, mpanakanto malaza amin'ny hatsaran-tarehy Art'Up… Continue Reading ny fomba nataoko tamin'ny taovoloko sy makiazy tao amin'ny salon Art'Up
Tip an'ny BeautyHack amin'ny herinandro: Mandroa sira
[ad_1] Aza mitsitsy fotoana haniriana hanao izany (indrindra ho an'ireo mponina ao amin'ny tanàn-dehibe)! Raha mangatsiaka ianao, reraka, milentika amin'ny adin-tsaina, tsapanao fa nanjary maina sy vovoka ny hoditra, be loatra amin'ny fiofanana - mandro ary ampiasao ny sira tianao. Avy amin'ireo manam-pahaizana ao amin'ny BeautyHack - safidy enina voaporofo. Voalohany,… Continue Reading Tip an'ny BeautyHack amin'ny herinandro: Mandroa sira
fitsapana ny fizotran'ny fomba famoronana vatana tsy misy fanaintainana
[ad_1] Mpampanonta maodely GBeautyHack Karina Andreeva dia nankany amin'ny salon hatsaran-tarehy “Millefeuille» On Frunzenkaya, nanandrana fizotran'ny fizotran'ny vatana folo tamin'ny fitaovana Italiana Icoon Laser ary nizara ny zavatra tsapany. Tsy handainga aho raha milaza fa saika ny vehivavy rehetra izao dia manonofy endrika tononkalo sy hoditra salama. Misy olona tsara vintana amin'ny génetika,… Continue Reading fitsapana ny fizotran'ny fomba famoronana vatana tsy misy fanaintainana
Ampitomboy avy hatrany! Kintana 10 izay tsy mandeha mibontsina
[ad_1] Ny ha dia tsy vitan'ny hoe manavao taovolo mankaleo, fa manova ny fizarana tarehy koa. Ary raha amin'ny tranga voalohany dia vitsy ny mety hisian'ny tsy fahombiazana, amin'ny faharoa dia sarotra kokoa ny zava-drehetra. Ohatra, ny bangs mahitsy tsy hifanaraka amin'ny vehivavy manana endrika tarehy toradroa, fohy ny fohy… Continue Reading Ampitomboy avy hatrany! Kintana 10 izay tsy mandeha mibontsina
Taovolo fironana 33 hanapa-kevitra mialoha ny 33
[ad_1] Volo-volo, pona, mohawks, fehiloha ady totohondry ary soavaly - izay tsy mbola nanandramanao? Aiza no hanaovana azy: HAIRDRYER Bar maina (Bolshaya Dmitrovka, 16/1, azo jerena eto ny adiresy rehetra) Vidiny isaky ny fametrahana: 1 400 roubles. (manenona), 2,000 roubles. (isan'andro), 3,500 16 roubles. ("Boogie Woogie"). Brow & Beauty Bar (Bolshaya Dmitrovka, XNUMX taona; Malaya Bronnaya,… Continue Reading Taovolo fironana 33 hanapa-kevitra mialoha ny 33
Fantatrao ve? Ahoana ny fahamatoran'ireo maherifo an'ny andian-tsarimihetsika fahitalavitra
[ad_1] Avy amin'i Luisana Lopilato avy amin'ny Rebel Spirit ny fitokonana ary andiany amin'ny fahitalavitra inona no niarahan'i Claire Danes niaraka tamin'i Jared Leto? BeautyHack dia manambara izay ataon'ny tanora malaza amin'ny taona 90 sy 2000 ankehitriny. Mischa Barton (Marissa Cooper ao amin'ny serial TV "OS - Lonely Hearts") Navoaka ny fizarana voalohany amin'ny andiany malaza… Continue Reading Fantatrao ve? Ahoana ny fahamatoran'ireo maherifo an'ny andian-tsarimihetsika fahitalavitra
Vokatra enina lafatra 6 izay ividianako hatrany hatrany
[ad_1] Nampitombo ny mason-koditra, ny lokony, ny boribory eo ambanin'ny maso - ny olana mahazatra? Mitaky ezaka sy vola be ny famoronana tonony tonga lafatra. Miresaka momba ireo tiako indrindra aho ao amin'ilay fizarana hoe "Mandra-pahatongan'ilay filatsaka farany." Sofia Vorobyova BeautyHack Editor Manitsy ny menaka tarehy CC Red, Erborian Ny fanovana mahagaga avy amin'ny maitso ka hatramin'ny beige dia… Continue Reading Vokatra enina lafatra 6 izay ividianako hatrany hatrany
Olo-malaza 15 misy volomaso lavorary
[ad_1] NSTNy bikan'ny volomaso voafantina tsara dia tsy vitan'ny hoe misokatra kokoa ny fisehoany, fa mandrafitra ny refy marina amin'ny tarehy koa. Amin'ity tranga ity, ny mpanakanto makiazy tsara indrindra eto an-tany dia manoro hevitra ny amin'ny fikatsahana lamaody. Na eo aza ny zava-misy fa ny volomaso matevina, mbola tsy "hiala" amin'ireo catwalk manerantany, ity endrika ity… Continue Reading Olo-malaza 15 misy volomaso lavorary
Tattozy Angelina Jolie 10 tokony ho fantatrao
[ad_1] Manan-janaka enina MH sy ny maso ivoho Goodwill Angelina Jolie dia mpankafy ny tombokavatsa. Ny hieroglyph an'ny "fahafatesana" no niseho voalohany tamin'ny vatan'ilay mpilalao sarimihetsika. Taorian'ny roa taona dia nesorin'i Angie izany, nosoloiny tamin'ny tatoazy bodista "Tai mivavaka mba hiarovana." Ny "kanto" rehetra amin'ny vatan'ny kintana dia manana… Continue Reading Tattozy Angelina Jolie 10 tokony ho fantatrao
vonona inona ny kintana noho ny asa aman-draharaha?
[ad_1] V firy taona i Bella Hadid nahazo ny rhinoplasty voalohany, ary fanjakana nanao ahoana i Kylie Jenner tamin'ny fisehoany vaovao? Ho fitsinjovana andraikitra, fifanarahana ary tetik'asa vaovao, vonona ny kintana Botox tsy hampidi-doza sy fandidiana plastika matotra ny kintana. 72 taona i Cher Cher, ary antsasaky ny… Continue Reading vonona inona ny kintana noho ny asa aman-draharaha?
Iza no tsy mandeha amin'ny volo fohy
[ad_1] Zdid ve tianao hamelombelona ny sary sa hanova ny sary? Makà fotoana handraisana fanapahan-kevitra hentitra - ny fanovana ny taovolo dia tsy mifanaraka amin'ny antenaina. Raha manana faniriana hihety volo fohy ianao dia fantaro aloha raha mety aminao ity lava ity. BeautyHack dia momba izay tsy tia taovolo fohy.… Continue Reading Iza no tsy mandeha amin'ny volo fohy
Tsy manadino ny mividy? Vokatra vaovao mafana mafana 10 amin'ny herinandro
[ad_1] Fitaovana fanatanjahan-tena mpankafy, rano voninkazo ho an'ny tarehy, patsa - mpitahiry ny hamandoana ary zava-baovao hafa amin'ity herinandro ity izay mendrika ny sainao. Massager amin'ny ketrona Massage Wrinkle Remover, MIZUHI Mahomby, tsotra, teti-bola - izany rehetra izany dia momba ireo gadget vaovao hatsaran-tarehy Japoney MIZUHI, izay azo vidiana tato ho ato ao L'Etoile. Niresaka momba… Continue Reading Tsy manadino ny mividy? Vokatra vaovao mafana mafana 10 amin'ny herinandro
Polina Gagarina sy ireo kintana rosiana hafa izay very lanja be
[ad_1] AMIN'NY seranam-piaramanidina, sakafo ara-dalàna na sakafo henjana - inona no nanampy an'i Polina Gagarina, Svetlana Khodchenkova, Anastasia Denisova ary kintana hafa hanana endrika? Polina Gagarina Ao amin'ny "Star Factory" dia tsy nitovy tamin'ny azy intsony i Polina ankehitriny. Ary ny tena tiana holazaina dia hoe tsy nanana taovolom-bolo vita sonia sy volo platinum izy… Continue Reading Polina Gagarina sy ireo kintana rosiana hafa izay very lanja be
Fijerena hatsaran-tarehy 18 avy amin'ny trichologist sy stylist
[ad_1] Tamara Berechikidze, mpandinika trikista malaza, malaza Alexei Nagorskiy, dia miresaka momba ny fomba hikolokoloana ny volonao, ny endrikao manify ary tsy misy volony, kofehy mavesatra be na lava be. Volo matevina lava Tamara Berechikidze Kandidà siansa ara-pahasalamana, dermatovenerologist-cosmetologist, trichologist 1) Raha manana volo lava sy mavesatra ianao dia misafidiana volo hazo misy tohotra tsara… Continue Reading Fijerena hatsaran-tarehy 18 avy amin'ny trichologist sy stylist
Ahoana ny fanatsarana ny hoditra? Manoro hevitra ny cosmetology
[ad_1] TAsya Al-Arabi, cosmetolozista iraisam-pirenena DIBI Milano any Russia, dia nilaza ny fomba hikolokoloana tsara ny hoditra, inona ny sakana amin'ny valan'aretina ary raha azo atao ny manatsara ny fahombiazan'ny crème. Asya Al-Arabi Trainer-cosmetologist an'ny kilasy iraisam-pirenena DIBI Milano any Russia Lazao anay ny momba ny fikolokoloana ny hoditra: ny fomba hisafidianana… Continue Reading Ahoana ny fanatsarana ny hoditra? Manoro hevitra ny cosmetology
Fomba fanitarana ny molotra amin'ny makiazy: toro-hevitra avy amin'ny mpanakanto makiazy
[ad_1] TOInona ireo singa ao anaty lip gloss, ny fomba fanaovana ny effet ombre, ary ny fomba fanaovana sary tsara ny contour amin'ny pensilihazo? Alefaso ny molotrao ary apetaho lokomena maromaro avy eo Lisa Eldridge Mampiasà savony alohan'ny hanombohana makiazy. Kiko's Scrub & Peel Wipe dia tsy vitan'ny hoe esory ny sombin'ny hoditra maty,… Continue Reading Fomba fanitarana ny molotra amin'ny makiazy: toro-hevitra avy amin'ny mpanakanto makiazy
saron-tava tsara indrindra miaraka amina voankazo
[ad_1] Ny NSapaya, watermelon, frezy, paoma ary avokado dia tsy fomba fahandro ho an'ny salama salama ary na dia tsy fangaro salady voankazo aza, fa tena mpanampy hatsarana ho an'ireo izay mila fanarenana sy hydration ny hoditra. Ny tonian-dahatsoratran'ny BeautyHack dia nanandrana ny saron-tava tsara indrindra niaraka tamin'ny voankazo ary namoaka ny didim-pitsaran'izy ireo. Mampifandanja ny saron-tava misy voan'ny voankazo Frances Balancing… Continue Reading saron-tava tsara indrindra miaraka amina voankazo
Fitaovana amin'ny lafiny ilany: ohatra kintana 15 tsara indrindra
[ad_1] Ny fanenenan-tantely dia afaka manamboatra ny volon-doha misy ifandraisany, ary ho an'ny tompon'ny volo manify dia tsy azo soloina tanteraka izany. Ireto misy ohatra tsara indrindra amin'ny bolo vita amin'ny sisiny sy ny fomba famerenana azy ireo ary hialana amin'ny lesoka. Wavy bob Ny sisiny manasaraka miaraka amina curl lava dia tsy vitan'ny mikapoka… Continue Reading Fitaovana amin'ny lafiny ilany: ohatra kintana 15 tsara indrindra
Manaova makiazy - ahoana no hamerenana
[ad_1] Christina Novikova, mpitsangatsangana - momba ny fomba fanaovan-tsakafo (sy ny vidiny) ny fanaovanao mofo sy izay vokatra mety amin'ny makiazy toy izany. Christina Novikova visagiste Inona no atao hoe baking? Ny fanendasana mofo no voalohany, fanaingoana an-tsehatra, izay ampiasaina amin'ny sarimihetsika, teatra ary amin'ny karipetra mena. Ny make-up toy izany dia tian'ny… Continue Reading Manaova makiazy - ahoana no hamerenana
Aza averimberina! Taovolo malaza 25 mampidi-doza amin'ny fotoana rehetra
[ad_1] DJennifer Lopez tonga tao amin'ny Oscars 2002 nitondra trapeze, ary i Kristen Stewart dia mihantsy mpaka sary sy mpitsikera matetika miaraka amin'ny taovolony mihomehy. BeautyHack dia nahafinaritra tamin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny tsy fahombiazan'ny kintana tamin'ny mpanao mari-pahaizana ambony Ivan Anisimov. Masoivohom-panjakan'ny sary malaza an'Ilana Anisimov Masoivohon'i Style Jennifer Lopez Tamin'ny voalohany dia nieritreritra aho fa ny sary dia… Continue Reading Aza averimberina! Taovolo malaza 25 mampidi-doza amin'ny fotoana rehetra
Hatsaran-tarehy villainous 10 lehibe avy amin'ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra
[ad_1] Maiza TOovarious avy amin'ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra "Clone", ilay Esmeralda mpihatsaravelatsihy avy amin'ny "Dream Coast" ary anjara asa ratsy tsy hay hadinoina 8 an'ny olon-dratsy. Daniela Escobar (Maiza). Ny andian-dahatsoratra "Clone" Ny anjara asan'ny Maiza mampihetsi-po sy tena tsy faly no asa lehibe voalohany an'ny mpilalao sarimihetsika voalohany dia i Daniela Escobar. Nanjary manjavozavo ilay toetra:… Continue Reading Hatsaran-tarehy villainous 10 lehibe avy amin'ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra
Ny fiovan'ny mpihetsiketsika Lozabe
[ad_1] roapolo taona lasa izay, tamin'ny 5 martsa 1999, dia navoaka ny sary mihetsika fahefatra sy malaza amin'ny tantara an-tsary hoe "Dangerous Liaisons" nataon'i Choderlos de Laclos. Ny hetsika dia nifindra tamin'ny taonjato faha-18 ka hatramin'ny faha-20, ary raha tokony ho France, New York tsara tarehy niseho teo amin'ny efijery. Mandritra ny fotoana kasainao hijerena indray ny Fikasana Lozabe, BeautyHack… Continue Reading Ny fiovan'ny mpihetsiketsika Lozabe
Ahoana no hikarakarana ny hoditrao amin'ny lohataona: torohevitra avy amin'ny dermatologist
[ad_1] Ny fikolokoloana tsara sy ny fampiasana ireo vokatra manaitra amin'ny vanim-potoana mangatsiaka dia tsy manome antoka fa tsy hisy pentina ny hoditra amin'ny fiandohan'ny hafanana. Inona no tsiambaratelo hatsaran-tarehy hanampy amin'ny fikarakarana karazana hoditra samihafa sy ny fomba hisafidianana ny vokatra tonga lafatra? Ny valin'ireto fanontaniana ireto dia efa hita… Continue Reading Ahoana no hikarakarana ny hoditrao amin'ny lohataona: torohevitra avy amin'ny dermatologist
Kintana 20 izay tsy mifankahazo
[ad_1] MIARAKA ny famandrihana, ny fanentanana, ny fanadihadiana any Hollywood. Ny safidy BeautyHack dia ahitana kintana 20 izay tsy dia mahita fiteny iraisana mihitsy. Madonna vs. Gwyneth Paltrow Ny mpilalao sarimihetsika sy ny mpanjakavavin'ny papa nandresy Oscar dia matetika no resahina fa namana efa nanao fianianana. Madonna sy Gwyneth dia nanana fifandraisana mafana nandritra ny fotoana ela, niantso mihitsy aza… Continue Reading Kintana 20 izay tsy mifankahazo
Sary tsara tarehy mahatsikaiky 30 indrindra
[ad_1] meme hatsaran-tarehy mahatsikaiky 30 [ad_2]
Vady filoham-pirenena tsara tarehy 10 indrindra tamin'ny fotoana rehetra
[ad_1] Avy amin'ny vehivavy frantsay Brigitte Macron ka hatramin'ny vehivavy voalohany ao Azerbaijan sy Cote d'Ivoire. Melania trompetra Farany resadresaka tsy tamin'ny satan'ny vehivavy voalohany, Melania nanome tamin'ny 2016 ny GQ Amerikanina. Avy eo ilay kintana tamin'ny fomba laika dia nizara ny vaovao tamin'ny fiainana ary "nanandrana" ny anjara asan'ny… Continue Reading Vady filoham-pirenena tsara tarehy 10 indrindra tamin'ny fotoana rehetra
Fototra 5 lehibe ho an'ny hoditra maina
[ad_1] Fanafody an-tserasera miorina amin'ny rano voninkazo lotus, crème BB izay misy vokany tsara fikarakarana sy fahitana hafa ho an'ny hoditra maina - tao amin'ny lahatsoratra iray vaovao nataon'ny talen'ny famoahana ny BeautyHack Karina Andreeva @ kandreevaa… Karina Andreeva Chief Editor of BeautyHack Manana hoditra mora tohina aho, ka manakaiky ny safidin'ny fototra… Continue Reading Fototra 5 lehibe ho an'ny hoditra maina
Volomaso Fairy: ahoana ny fomba hahatonga ny endrika ho lavorary
[ad_1] Ny mpanakanto hatsaran-tarehy Vand Kelly Baker dia niasa tao Hollywood nandritra ny 17 taona, izay nantsoina hoe "angano volomaso." Ny lisitry ny mpanjifany dia ahitana ny fianakavian'i Kardashian-Jenner iray manontolo, Shay Mitchell, Cardi B, Zendaya, Ariana Grande, mpilalao ny Game of Thrones ary kintana am-polony hafa. V Instagram Ny fiainan'i Kelly dia… Continue Reading Volomaso Fairy: ahoana ny fomba hahatonga ny endrika ho lavorary
Oay! Ahoana ny endrik'ireo mpilalao sarimihetsika nilalao ankizy tamin'ny fahitalavitra Breziliana ankehitriny?
[ad_1] V Tamin'ny taona 1990, fialam-boly vaovao niseho tamin'ny fiainan'ny fianakaviana "taorian'ny Sovietika" - ny fahitana fahitalavitra. Amin'ireo fotoana tsy dia lavitra loatra, dia tsy fahita firy ireo kapila - mba hahitana ny fiafaran'ilay telenovela, isaky ny hariva dia tsy maintsy esorinao ny zava-drehetra ary hipetraka eo amin'ny efijery ianao. Ireo maherifon'ny… Continue Reading Oay! Ahoana ny endrik'ireo mpilalao sarimihetsika nilalao ankizy tamin'ny fahitalavitra Breziliana ankehitriny?
ny fomba nanandramako an'i Achromin nandritra ny tapa-bolana
[ad_1] NSR tadidio ny crème whitening malaza amin'ny fonosana mavokely sy beige, izay hita tao amin'ny efitrano fandroana trano Sovietika sy post-Sovietika? Nanomboka teo dia nanatsara ny forongony ny marika, nanao rebranding ary niseho teny amin'ny talantalana fivarotana tamin'ny kinova nohavaozina (anatiny sy ivelany). Namoaka ny fanaony ny tonian-dahatsorin'ny BeautyHack Yulia Kozoliy… Continue Reading ny fomba nanandramako an'i Achromin nandritra ny tapa-bolana
ahoana no nanosihosan'ny kintana antsika tamin'ny 1 aprily?
[ad_1] Hatramin'ny fitondrana vohoka alohan'ny fisaraham-panambadiana: BeautyHack - momba ny vazivazy kintana omaly, izay saika ninoanay. Justin Bieber Omaly dia nizara ny vaovao mahafaly ny mpivady Bieber - miandry zaza i Haley. Ho porofon'izany, nandefa scan ultrasound niaraka tamin'ny embryon iray i Justin: nisy olona nihazakazaka niarahaba ny mpivady, ny hafa kosa nisalasala - tena mahasoa tokoa… Continue Reading ahoana no nanosihosan'ny kintana antsika tamin'ny 1 aprily?
8 Miss World miaraka amin'ny lahatra mahaliana
[ad_1] Miss 8 miaraka amin'ny lahatra mahaliana [ad_2]
Fahadisoana enti-6 nataonao
[ad_1] INONA no mety hateraky ny fanararaotana ireo vokatra fanoritana, ny fomba hisafidianana ny sisiny mety amin'ny fanaingoana ary maninona no avela avela hangatsiaka ny volo? WELLA National Expert Igor Kimyashov - momba ireo lesoka mahazatra indrindra ataonao rehefa manaingo ny volonao. Igor Kimyashov manam-pahaizana nasionaly WELLA Mistake # 1:… Continue Reading Fahadisoana enti-6 nataonao
Kintana 10 nanjary nalaza tamin'ny fahazazanao
[ad_1] V Sarimihetsika inona no lalaovin'i Angelina Jolie tamin'ny faha-6 taonany, ahoana no nahazoan'i Drew Barrymore ny anjara asany voalohany tamin'ny faha-11 taonany ary sarimihetsika malaza aiza no ahitanao an'i Elijah Wood kely? Ao amin'ny fisafidianana BeautyHack manokana, misy kintana niseho tamin'ny fahitalavitra tamin'ny fahazazany.… Continue Reading Kintana 10 nanjary nalaza tamin'ny fahazazanao
Tsisy olana? Mpivady tsara tarehy 10 manana fahasamihafana lehibe amin'ny taonany
[ad_1] RTNy fahasamihafana ao anatin'ny 10, 20 taona ary na dia ampahefatry ny zato aza dia tsy manelingelina ireo kintana ireo - manaporofo amin'ny ohatra nomeny fa tsy misy sakana ho an'ny tena fitiavana. Ao amin'ny BeautyHack dia misy mpivady kintana tsara tarehy folo izay tsy sakana ny taona. Nick Jonas sy Priyanka Chopra… Continue Reading Tsisy olana? Mpivady tsara tarehy 10 manana fahasamihafana lehibe amin'ny taonany
ny fomba nahatongavanay tamin'ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fanesorana volo
[ad_1] NSWinter, laser, ultrasonic, photo-, electro-… Tamin'ny taonjato faha-21, ny teny hoe "epilation" dia misy karazany maro, ary manana fomba maro hanalana volo isika. Ankehitriny dia azo atao na dia ao an-trano aza, ary tsy misy fanaintainana, fanehoan-kevitra amin'ny hoditra ary olana hafa, ary ny tena zava-dehibe: ny nofinofin-jazavavy rehetra - manala… Continue Reading ny fomba nahatongavanay tamin'ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fanesorana volo
Kintana 10 nahazo tombony tamin'ny fandidiana plastika
[ad_1] BElla Hadid, Megan Fox ary Blake Lovely dia mbola tsy nanambara ampahibemaso ny fandidiana plastika mihitsy. Saingy fantatra fa niakatra ambony ny asan'ny tovovavy taorian'ny fiovan'ny endrika ivelany. Iza koa no tokony hiteny hoe "misaotra" an'ireo mpandidy plastika - ao amin'ilay fitaovana BeautyHack! Megan Fox Megan Fox dia mandà izay fandidiana plastika sy hafa… Continue Reading Kintana 10 nahazo tombony tamin'ny fandidiana plastika
Maria Ginzburg sy Rasida Lakoba - momba ilay tetikasa vaovao The-Face-Only
[ad_1] NSWhy manomboka mitsidika mpanao hatsaran-tarehy nefa tsy mahita fotoana? Sa matahotra dokotera manao palitao sy tsindrona? Atsaharo ny tahotrao: tetikasa vaovao noforonina The-face-ho anao irery ihany - ireo izay te hikarakara ny hodiny sy hamonjy ny fotoanany. Ny endrika pop-up dia tsy midika hoe fomba fanaintainana na… Continue Reading Maria Ginzburg sy Rasida Lakoba - momba ilay tetikasa vaovao The-Face-Only
Fironana hatsaran-tarehy 5 avy amin'ny Herinandron'ny lamaody any Moskoa izay tianay
[ad_1] Herinandron'ny lamaody Mercedes-Benz matetika manaraka ny lamaody lehibe any New York, London, Milan ary Paris i Russia. Tamin'ity taona ity, nanatrika ny hetsika lamaody ny mpamorona Yulia sy Alisa Ruban, Alena Akhmadullina, Alexander Arutyunov. Nahasarika ny saina ny fironana momba ny hatsaran'izao tontolo izao, izay namboarina tsara tamin'ny catwalks any Moskoa. Volo mando vokany Iray amin'ireo… Continue Reading Fironana hatsaran-tarehy 5 avy amin'ny Herinandron'ny lamaody any Moskoa izay tianay
inona no nanjo ireo mpandray anjara tamin'ny seho Rosiana voalohany
[ad_1] V Tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, endrika vaovao no niseho tamin'ny fahitalavitra Rosiana - fampisehoana zava-misy. Tsy tapaka, mpijery fahitalavitra an-tapitrisany maro no nandatsaka ny zava-drehetra mba hananana olana vaovao "Behind the Glass" na "The Last Hero". Inona no nitranga tamin'ireo kintana tamin'ny fahitalavitra, izay nanorina fitiavana teo amin'ny… Continue Reading inona no nanjo ireo mpandray anjara tamin'ny seho Rosiana voalohany
[ad_1] Rindrina AParty, menaka fitsangantsanganana, reraka ny tongotra ary hafa amin'ny fanangonana vokatra vaovao amin'ity herinandro ity. Ny menaka volo Tahitian Monoi, Alan Hadash Ny marika Alan Khadash, izay manambatra ny fomban-drazana israelianina sy ny teknolojia maoderina any Alemana, dia niseho tany Russia tsy ela akory izay, noho izany dia tianay ny hampahatsiahy anao ny fanangonana… Continue Reading Tsy manadino ny mividy? Vokatra vaovao mafana mafana 10 amin'ny herinandro
Safidin'ireo mpamoaka lahatsoratra: Mistra 10 ambony & Famafazana tarehinao
[ad_1] Vesna! Midika izany fa efa tapitra ny fotoana hanaovana endrika matevina sy mavesatra. Ny tsifotra sy zavona rivotra no manaraka ny manaraka. Ireo mpamoaka lahatsoratra BeautyHack dia nanandrana ny "namana akaiky indrindra" ho an'ny hoditra hydrated. Fanosotra menaka fanosotra menaka fanosotra Glacial Spray, Skyn ​​Islandy Notsapain'ny tonian-dahatsoratry ny BeautyHack Anastasia Speranskaya, fifantohana, mponin'ny megalopolises (fa tsy vitan'ny)! Nahita… Continue Reading Safidin'ireo mpamoaka lahatsoratra: Mistra 10 ambony & Famafazana tarehinao
Safidin'ny kintana: hanitra 12 ambony
[ad_1] Hatalya Vodianova, Angelica Timanina, Maria Ivakova ary kintana hafa - momba ireo hanitra nifankafizan'izy ireo nandritra ny taona maro! Safidin'ny mpanolotra amin'ny fahitalavitra Maria Ivakova: Sarintanin'ny Lady, Frederic Malle Heveriko ho hanitra soniaviko ny Portrait Of A Lady avy amin'i Frederic Malle - manana… Continue Reading Safidin'ny kintana: hanitra 12 ambony
Teny nalaina mahatsikaiky indrindra tamin'ny andian-tsarimihetsika fahitalavitra tamin'ny taona 90
[ad_1] V Tany am-piandohan'ny taona 90 dia fomban-drazana isaky ny fianakaviana ny mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra amin'ny hariva. Ny sasany tamin'izy ireo dia voatery nitomany sy niombom-pihetseham-po tamin'ireo mahery fo, ary ny sasany nihomehy, nahazo "ampahan'ny" endorphins ao anaty ra. Ary satria ny fihomehezana dia manalava ny androm-piainany, BeautyHack dia nanangona ny teny farany tsara indrindra… Continue Reading Teny nalaina mahatsikaiky indrindra tamin'ny andian-tsarimihetsika fahitalavitra tamin'ny taona 90
Hevitra manicure 12 ao amin'ny aloky ny taona 2019
[ad_1] TOOral Living Coral laharana 16-1546 no loko lehibe indrindra amin'ny taona 2019 hoy ny Pantone Color Institute. Aorian'ny fitaovana momba ny vokatra hatsaran-tarehy ao anaty alokaloka mamirapiratra dia mamoaka safidy manicure sy salon izahay, izay ahafahan'izy ireo mamerina mora foana! Aiza no hanaovana azy: Salon hatsaran-tarehy Inhype Beauty ZoneAddress: Moskoa, 1st Smolensky per.,… Continue Reading Hevitra manicure 12 ao amin'ny aloky ny taona 2019
Fironana makiazy 7 ho an'ny mpanambady amin'ny 2019
[ad_1] Ny mpanaingo makiazy miankina Yulia Kupriy (@kupryimakeup) dia nilaza hoe iza amin'ny zana-tsipìka no manan-danja amin'ity vanim-potoanan'ny mariazy ity, maninona ny mpampakatra rehetra no tokony hanana volomaso mavo sy mavokely mavo ao anaty poketrany. Julia Kupriy Mpanakanto makiazy mahaleo tena “Efa androany, ireo mpanambady amin'ny ho avy dia mijery magazine mitady ny makiazy fampakaram-bady tonga lafatra. Alokaloka pastel sy volony matte… Continue Reading Fironana makiazy 7 ho an'ny mpanambady amin'ny 2019
Inona no nanjo azy ireo? Ny fiakarana sy ny fidinan'ny mpilalao sarimihetsika Breziliana
[ad_1] Ny andiana fahitalavitra Breziliana V 90 dia teo an-tampon'ny lazany. Ireo izay tsy liana amin'izay ataon'ny mpilalao sarimihetsika malaza mandritra ny 15 taona dia ho faly: miditra amin'ny fifanarahana dokambarotra an-tapitrisany dolara, manan-janaka ary mbola manohy milalao. Misy kintana fahitalavitra sivy miaraka amin'ny fiainana tena mahaliana ao amin'ny BeautyHack.… Continue Reading Inona no nanjo azy ireo? Ny fiakarana sy ny fidinan'ny mpilalao sarimihetsika Breziliana
Modely 6 eny ivelan'ny talantalana nanova ny indostria
[ad_1] VNy EU dia lavitra ny fomba tokana ahafahana miavaka amin'ny sehatry ny lamaody. Misy ohatra rehefa, mivoaka amin'ny fonon'ny American Vogue, ny modely dia miala amin'ny tany misy olana matotra kokoa toy ny hazakazaka. Tovovavy sahabo enina eo ho eo sahy miseho ivelany - amin'ny BeautyHack ara-nofo. Beverly Johnson Beverly dia iray… Continue Reading Modely 6 eny ivelan'ny talantalana nanova ny indostria
Vina manitra sy volo 5 tianao indrindra amin'ny lohataona
[ad_1] VS spring any Mosko dia tsy mitovy mihitsy ary tena tsy azo vinavinaina: na ny fiakaran'ny hafanana tampoka farafahakeliny +10, ny toetr'andro mafana (mafana na dia amin'ny palitao hoditra aza) sy ny masoandro mamiratra, na misy oram-panala maranitra ary mihena ny thermometer ny ampitson'iny. Mba tsy hitsambikina ny toetranao, toy ny toetrandro,… Continue Reading Vina manitra sy volo 5 tianao indrindra amin'ny lohataona
Kintana 10 izay nanova ny tarehin-dry zareo tsy takatry ny saina intsony
[ad_1] TOA ahoana no nanipazan'i Jessica Simpson 30 kg, inona ny tsiambaratelon'ny firindrana i Victoria Lopyreva ary inona no nanampy an'i Polina Gagarina hihena? Ireo olo-malaza nanova ny tarehimarika tsy azony ekena dia ao amin'ny fanangonana BeautyHack. Jessica Cypson Ny haavon'i Jessica dia 161 cm, ny lanjan'ny mahazatra dia 55 kg. Simpson dia mora tohina ary mahazo… Continue Reading Kintana 10 izay nanova ny tarehin-dry zareo tsy takatry ny saina intsony
Amim-pitandremana! Taovolo stellar 22 manimba ny volonao
[ad_1] TOO inona no taovolo sy fomba tsy tokony hatao isan'andro? Fifandraisana amin'ireo mpamaky bika. Artak Hayrapetyan, mpamaky bika ao amin'ny Beauty Stop26: 1. Combs Ny fitsipiky ny famonoana dia minia mikorontana ny volo noho ny hamaroany. Saingy noho io antony io dia mikorontana fotsiny ny firafitry ny volo: misaraka ny mizana, toy ny… Continue Reading Amim-pitandremana! Taovolo stellar 22 manimba ny volonao
Kintana 20 izay tsy mahomby amin'ny hatsaran-tarehy velively
[ad_1] TOAROTRA inona avy no ampiasain'ny kintana amin'ny fanaovana endrika lafatra sy ny fomba hamerenana ny makiazy Natasha Poly avy amin'ny karipetra mena? Ny ampahany faharoa amin'ny fitaovana dia momba ny zazavavy tsy manana slip hatsaran-tarehy. Vakio ny rohy voalohany. Ny kaonty Instagram ofisialin'i Sienna an'i Sienna dia sary iray ihany, fa misy profil hafa rehetra… Continue Reading Kintana 20 izay tsy mahomby amin'ny hatsaran-tarehy velively
Cushion 20 tsara indrindra amin'ny lohataona
[ad_1] TOA ahoana no ahazoana ny rakotra maivana indrindra ary iza amin'ireo ondana no sarona eo ambanin'ny faribolana mason'ireo maso sy ireo famantarana hafa momba ny havizanana? Ireo mpanakanto sy mpamaham-bolongana makiazy dia miresaka momba ny fitaovana ampiasainy amin'ny asa sy ny fiainana. Victoria Moiseeva Mpanakanto makiazy mahaleo tena, bilaogera Cushion Air Fit, A'pieu Nanomboka tamin'ity marika ity ny hetsiky ny cushons, ary amin'izao fotoana izao… Continue Reading Cushion 20 tsara indrindra amin'ny lohataona
20 lokomena lokomena ho an'ny blondes
[ad_1] Vizazhist Evgenia Rusinovskaya dia nilaza ny fomba hahitana ny lokon'ny lokomena, ary nizara ny vokatra tiany indrindra ho an'ny blondes. Evgeniya Rusinovskaya Visagiste Rehefa misafidy loko lokomena dia miainga amin'ny karazana loko (mafana na mangatsiaka) ary ny aloky ny volo. Ny loko mafana dia mety amin'ny zazavavy manana blond mafana; mangatsiaka, ho an'ny… Continue Reading 20 lokomena lokomena ho an'ny blondes
Taovolo 12 Angelina Jolie izay mifanaraka amin'ny rehetra
[ad_1] BeautyHack dia nisafidy taovolo tsotra sy marimaritra iraisana ho an'ilay kintana ary nangataka ny mpahaingo azy Anna Portkova haneho hevitra momba azy ireo. Anna Portkova Trichologist-consultant Bundles, volume amin'ny satro-boninahitra, fisarahana amin'ny offset, volom-borona mihemotra, bangs - manana fomba faran'izay tsotra i Stylina anjely! Izany rehetra izany dia azo atao ao an-trano, raha mbola mitovy ny… Continue Reading Taovolo 12 Angelina Jolie izay mifanaraka amin'ny rehetra
Safa tsy infareda: tombontsoa sy voka-dratsy
[ad_1] V Azonao atao ny mampiasa ny sauna infrared amin'ny foibe fanatanjahan-tena maoderina - malaza eo amin'ireo olona mikarakara hatsarana sy fahasalamana izany. Ny onja tsy manavanana dia misy fiatraikany tsara, izay miditra lalina ao anaty ny vatana, manafana azy. Tsy misy hamandoana ao anaty booth, izay mampitombo ny hatsembohana ary manala ny poizina… Continue Reading Safa tsy infareda: tombontsoa sy voka-dratsy
Salun hatsaran-tarehy vaovao 4 hitsidika
[ad_1] Toerana hatsaran-tarehy Ot, izay fantatry ny rehetra momba ny fikolokoloana ny hoditry ny tarehy, amin'ilay tetik'asa vaovaon'i Stefista Yegor Ryabushko. The-Face-Only dia novolavolain'ny tovovavy roa be atao: ny mpamorona ny marika Rasario Rasida Lakoba ary ny mpanorina ny rox salon Wax & Go Maria Ginzburg. Manana zanaka fito ho an'ny roa izy ireo. Noho izany,… Continue Reading Salun hatsaran-tarehy vaovao 4 hitsidika
Mamiratra fotsiny: famerenana ireo vokatra mamirapiratra tsara indrindra
[ad_1] Ireo mpamoaka lahatsoratra RBeautyHack dia manandrana ny masomaso, ny fisongadinana, ny vovoka ary ny glitters tsara indrindra miaraka amin'ny mamirapiratra sy shimmer marefo izay tazana avy eny amin'ny habakabaka. Highlighter Skin Love Glow Glaze Stick, Becca Choice an'ny tonian-dahatsoratry ny BeautyHack Anastasia Speranskaya tamin'ny volana martsa, dia nanolotra fanangonana vaovao, Skin Love, izay misy ireo vokatra misy soratra hoe eco-friendly, i Becca. Misy ny zava-drehetra… Continue Reading Mamiratra fotsiny: famerenana ireo vokatra mamirapiratra tsara indrindra
ny fomba nanandramako ny fomba Dermadrop
[ad_1] ARY ilay tonian-dahatsoratry ny BeautyHack dia nandeha tany amin'ny toeram-pitsaboana cosmetology vaovao Gen87to mba hitsapana ny fomba Dermadrop. Iza no mety aminy ary azo raisina ho toy ny analogue tsy mampanaintaina ny biorevitalisation? Anastasia Speranskaya Mpanonta zoky BeautyHack Mafana ny masoandro, mitsoka ny rivotra, maina ny bateria - tsy ny hoditra rehetra no… Continue Reading ny fomba nanandramako ny fomba Dermadrop
Safidy manicure 30 ho an'ireo tsy tia zavakanto
[ad_1] Reraka ny sarona miloko ambany, saingy tsy vonona ny hitaona ny Sistine Chapel eo amin'ny hohonao ianao - efa mahazatra ve izany? BeautyHack dia nanangona safidy art hoho ho an'ireo tia minimalism ary nilaza tamin'izay salon aiza ao Mosko no azo averina. Asehoy fotsiny ny tompony! Aiza no hanaovana azy: Beauty salon Inhype… Continue Reading Safidy manicure 30 ho an'ireo tsy tia zavakanto
Fanokafana volo: mahatsara sy maharatsy
[ad_1] Moa ve mandany fotoana ny fanaingoanao isan'andro? Ataovy maharitra izany amin'ny sokitra volo. Ny fomba fanao dia manamboatra ny habetsaky ny volony sy ny curls amin'ny alàlan'ny famoronana manokana, styler na curlers. Haharitra telo ka hatramin'ny valo herinandro ny perm! BeautyHack - momba ny mahatsara sy maharatsy ny sokitra volo. Inona no atao sokitra volo? Ny sokitra dia famoronana… Continue Reading Fanokafana volo: mahatsara sy maharatsy
Ahoana ny fomba hanesorana haingana ny sery amin'ny molotra: manoro hevitra ny dermatologist
[ad_1] Andao hanombohana amin'ny vaovao mahadiso fanantenana: ny 4% -n'ny mponina manerantany ihany no tsy mitondra ny virus herpes. Ary ny azo inoana fa maningana ianao, fa tsy ny fitsipika, dia azo tsinontsinoavina. Noho izany, ny fanontaniana ny fanesorana ny hatsiaka amin'ny molotra dia mety ho lasa manan-danja amin'ny fotoana rehetra. Nilaza i Viktoria Britko, Dermato-cosmetolozista, fa ahoana… Continue Reading Ahoana ny fomba hanesorana haingana ny sery amin'ny molotra: manoro hevitra ny dermatologist
ahoana ny endriny ary aiza no hamerenana azy io any Moskoa
[ad_1] Fanontana an-tsokosoko, alokaloka mamiratra niniana niniana natao tamim-pahamendrehana, fikosehana ary miboridana kilalao misy sary an-tsary - ireo manicurist amin'ny seho lamaody dia nampiasa ny fomba rehetra hisarihana ny saina amin'ireo hoho an'ireo maodely. Ireo rehetra ireo dia azo averina dieny izao ao amin'ny salon any Moskoa - hevitra sy adiresy mahasoa ao amin'ny fitaovana BeautyHack! Alokaloka mena eo amin'ny… Continue Reading ahoana ny endriny ary aiza no hamerenana azy io any Moskoa
Vokatra 5 no nampiasaiko tanteraka
[ad_1] Tonian-dahatsoratry ny RBeautyHack Yulia Kozoliy - momba ny menaka, sarontava ary emulsion ho an'ny tarehy mifanentana aminy tonga lafatra ary, farafaharatsiny, mendrika ny hojerenao. Fanosotra menaka fanosotra Botanical Kinetics Hydrating Soft Crème, Aveda Tsy mihevitra ny tenako ho iray amin'ireo mpankafy mahatoky indrindra an'i Aveda aho - tsy ny vokatra rehetra no mety amiko, ary ny… Continue Reading Vokatra 5 no nampiasaiko tanteraka
rehetra momba ny fandidiana plastika any Korea
[ad_1] Ny mpandidy plastika TOOreiana dia heverina ho manana traikefa be indrindra eran'izao tontolo izao. Raha ny antontan'isa dia isaky ny vehivavy aziatika fahadimy dia nanao fandidiana tarehy iray farafaharatsiny. Mametraka ny estetika eo amin'ny tsipika fivoriambe, ireo manam-pahaizana Koreana dia nanatsara ny fahaizany, nanatsara ny hetsika rehetra. Hatreto dia i Korea no nanao ny asa betsaka indrindra manerantany. Fizahan-tany ara-pitsaboana… Continue Reading rehetra momba ny fandidiana plastika any Korea
Ahoana no hamaritana ny loko misy anao ary ilaina ve izany?
[ad_1] Mpanakanto TOcolourist sy makiazy - momba ny lanjan'ny karazana loko ankehitriny ary ny antony tsy tokony hiankinanao tanteraka amin'io toetra io rehefa misafidy kosmetika na te hanova ny lokon'ny volonao. Mpanakanto makiazy Christina Novikova, mpamorona ny sekoly makiazy Novikova Studio Ankehitriny ny fizarazarana ny endrika araka ny karazany loko dia toa… Continue Reading Ahoana no hamaritana ny loko misy anao ary ilaina ve izany?
Inona no resahin'ireo bilaogera: Nastya Swan
[ad_1] Mpanambady sy mpamaham-bolongana Nastya Swan - momba ireo fombafomba hatsarana isan'andro, firindrana anaty miaraka amin'ny tena, sakafo mahavelona ary fanatanjahantena. Momba ny fahasalamana ara-tsaina Mba hahitam-bokatra dia tena ilaina ny mitazona ny fandanjalanjana, ny fifandanjana anaty ary mitazona ny eritreritrao hilamina. Ny fanao ara-panahy, ny fiaraha-miasa amin'ny psikolojika ary ny fifandraisana amin'ny tenako dia manampy ahy… Continue Reading Inona no resahin'ireo bilaogera: Nastya Swan
Mpanolotra fahitalavitra 11 tsara tarehy indrindra tao anatin'ny 20 taona
[ad_1] Othey dia afaka nanangana kariera modely mora tsy ratsy noho ny an'i Cindy Crawford, saingy naleon'izy ireo ny studio fahita lavitra noho ilay catwalk. Ekaterina Andreeva, Mona Abu Hamze ary mpanolotra fahitalavitra mahafinaritra 9 hafa tato anatin'ny 20 taona. Ekaterina Andreeva Raha mijery an'i Catherine ianao dia toa mbola foana ilay pilina noho ny fahanterana… Continue Reading Mpanolotra fahitalavitra 11 tsara tarehy indrindra tao anatin'ny 20 taona
Seho fahitalavitra breziliana 10 tsara indrindra tamin'ny fahazazanao
[ad_1] V Tamin'ny taona 1988, naseho tao amin'ny USSR ny andiany fahitalavitra Breziliana voalohany “Slave Izaura”. Ny tantaram-pitiavan'i Izaura dos Santos sy Leoncio Almeida dia narahin'ny firenena midadasika. Tany am-piandohan'ny taona 80, Susana Vieira, Vera Fischer, Antonio Fagundes ary mpilalao sarimihetsika malaza hafa dia nanjary "mpikambana" saika ny fianakaviana rehetra tao… Continue Reading Seho fahitalavitra breziliana 10 tsara indrindra tamin'ny fahazazanao
Vokatra 5 ho an'ny tonony tsy misy kilema sy ny fampitahana azy
[ad_1] RAnastasia Speranskaya, tonian-dahatsoratry ny BeautyHack, dia nanandramana primera manalefaka, fototra misy vokany mamirapiratra, mpamirapiratra mitovy amin'ny volamena ranoka, ary vokatra hafa ho an'ny hoditra tonga lafatra amin'ny teti-bola rehetra. Primer Foundation ho an'ny makiazy Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent Tadidinao ve ny vokatra milamina amin'ny fampiharana fanovana sary malaza? Miaraka amin'ity primer ity… Continue Reading Vokatra 5 ho an'ny tonony tsy misy kilema sy ny fampitahana azy
ny menaka manitra tsara indrindra amin'ny endrika fitsangatsanganana
[ad_1] Arum, miorina amin'ny fifanoherana maranitra eo amin'ny vatomamy landy sy patchouli, amber tsotra nefa mahomby miaraka amina resina spruce viscous ary ranom-boasary makà iray hafa ary ireo hanitra hafa mety ho entina miaraka aminao rehefa miala sasatra - jereo ao amin'ny safidy vaovao mpitsikera ny ranomanitra Ksenia Golovanova. Eau de parfum Bergamote &… Continue Reading ny menaka manitra tsara indrindra amin'ny endrika fitsangatsanganana
Saron-tava 9 tsy mahazatra indrindra
[ad_1] Ireo mpandinika BeautyHack dia nandany ny tontolo andro nanao saron-tava mahafinaritra indrindra, tsy mahazatra ary mahaliana indrindra. Milaza momba ny zavatra tsapanay izahay - iza no mila izany ary nahoana? Saron-tava bubble misy singa roa ho an'ny fanadiovana sy fikolokoloana ny hoditra Double Dare, OMG! Sarontava Koreana Double Dare OMG! Tian'ireo bilaogera izany - noho ny fonosana mahatalanjona miaraka amin'ilay vehivavy “marika”… Continue Reading Saron-tava 9 tsy mahazatra indrindra
Hanitra 15 nofinofisin'ny tsirairay
[ad_1] Ny fofona manitra sy zava-baovao avy amin'ny zava-manitra mifantina, izay nipoiran'ny lohataona tao am-panahy, dia ao amin'ny fanangonana BeautyHack manokana. Eau de parfum Rose Oud, Korloff Paris Hoy ny frantsay: "Ny fanomezana an'i Korloff dia ny fanekena ny fitiavanao." Ary tsy maninona izay tiana hambara, firavaka firavaka miaraka amin'ny fanaparitahana… Continue Reading Hanitra 15 nofinofisin'ny tsirairay
Miresaka sy mampiseho izahay: zava-baovao hatsaràna 15 amin'ny volana aprily
[ad_1] Miresaka sy mampiseho izahay: zava-baovao mahafinaritra 15 amin'ny volana aprily [ad_2]
kintana izay "crumpets" tamin'ny fahazazany
[ad_1] V fahazaza, ireto "pyshechki" malaza ireto dia niteraka fifankatiavana teo amin'ny hafa: oh, ireo takolaka mena volo ireo. Rehefa matotra izy ireo dia nanapa-kevitra fa tonga ny fotoana hialana amin'ireo "vala" ary hivadika hatsaran-tarehy mihaja. Ireo olo-malaza izay saro-kenatra tamin'ny fahazazany - tamin'ny fanangonana BeautyHack. Jennifer Goodwin Nanjary tia ny cutie ny mpijery… Continue Reading kintana izay "crumpets" tamin'ny fahazazany
Vehivavy tsara tarehy 15 amin'ny politika
[ad_1] Nanomboka tamin'ny vehivavy voalohany malaza indrindra tany Moyen Orient ka hatramin'ny vehivavy lefitra tsara tarehy indrindra ao Brezila. Ao amin'ny lahatsoratra BeautyHack - Mpanjakavavy Rania, Ivanka, Melania Trump ary tovovavy 12 hafa izay manao ny zava-drehetra tanteraka. Melania trompetra Tsy nahalala izany i Melania dia nanomboka ny asany ara-politika tamin'ny 2005, rehefa nanambady an'i Donald Trump izy. A… Continue Reading Vehivavy tsara tarehy 15 amin'ny politika
Ahoana ny fampiharana ny menaka manitra tsara?
[ad_1] Ny làlana mahafinaritra NSA dia tsy hamela ny hafa tsy hiraharaha, ary hanome anao fahatokisan-tena. Rehefa mampiasa eau de toilette dia tsy maintsy tsiahivina fa ny feo sy ny faharetan'ny fofona dia mihazona lafiny maro. Ny tena lehibe dia ny fampiharana tsara ny ranomanitra amin'ny faritra amin'ny vatana sy fitafiana. BeautyHack dia momba ny fomba… Continue Reading Ahoana ny fampiharana ny menaka manitra tsara?
Vokatra makiazy 5 tsy mety ampiasainao
[ad_1] TOSenia Wagner dia manao fanadinana amin'ny lojika hatsaran-tarehy: mpianatra mahay - mpianatra dimy, mpianatra tsy mahomby - hamerina! 1) BB cream ianao: apetaho amin'ny fotony toy ny tonony. Raha ny marina, tsy heloka io - ary tsy hosazina toa an'i Raskolnikov ianao. Amin'ny fepetra iray: raha matetika ny base… Continue Reading Vokatra makiazy 5 tsy mety ampiasainao
antony tsy fantatrao
[ad_1] Ny herinaratra, ny akora simika ao an-trano ary ny antony tsy ampoizina hafa manaparitaka ny hoho. Tsy fahampian'ny vitamina Ny antony mahatonga ny hoho mizara roa dia mety ho anatiny sy ivelany. Ny hazo palma dia an'ny tsy fahampian'ny vitamina sy microelement: kalsioma, vitamina D, phosforus, silikone, vy. Noho ny tsy fahampian'izy ireo dia tsy ny hoho ihany no mijaly, fa ny volo sy hoditra koa. Ao… Continue Reading antony tsy fantatrao
Menaka manitra Peppermint ho an'ny volo mahafinaritra: tena miasa ve io?
[ad_1] TOolumnist BeautyHack, mpanorina marika kosmetika voajanahary (@ naturalal.ua) Vita Liasota dia nilaza ny antony anampiana menaka manitra ny dipoavatra amin'ny kosmetika volo ary raha tena manampy amin'ny fitomboan'ny randrana amin'ny valahany izany. "Amin'ny famokarana kosmetika, matetika dia mampiasa menaka manitra peppermint izahay - nanana kirihitra mifototra amin'izany aza izahay. It… Continue Reading Menaka manitra Peppermint ho an'ny volo mahafinaritra: tena miasa ve io?
Sarimihetsika fitiavana 5 ambony amin'ny 2019
[ad_1] Aorian'ny andro mandreraka any am-piasana, te hiala sasatra amin'ny melodrama ve ianao na hamoaka ny fihetseham-ponao amin'ny fijerena sarimihetsika momba ny fitiavana? Manasa anao izahay hahafantatra tsara ny safidinay, izay ahitana ireo zava-baovao farany amin'ny taona 2019. Manomboka amin'ny voalohany Ny kintana dia milalao an'i Jennifer Lopez mahafinaritra (vakio… Continue Reading Sarimihetsika fitiavana 5 ambony amin'ny 2019
Taovolo 18 manaingo volo lava
[ad_1] Antony VVictorian, singa Gothic ary fahalalahana tanteraka amin'ny fisafidianana kojakoja! Fonosana sarotra Ity romance somary Victoriana ity izay mora indrindra adika amin'ny volo lava. Raha miaraka amin'ny kojakoja goavambe ianao dia tsy eny an-dalana noho ny kaody akanjo na ny safidinao manokana, dia azonao atao ny mametra ny tenanao amin'ny tsy fahitana na tarika elastika… Continue Reading Taovolo 18 manaingo volo lava
Page 1 ... Page 44 taloha kokoa Lahatsoratra
Tsy misy hevitra aseho.
Mirehareha amin'ny alàlan'ny WordPress.